İmamoğlu, Teleferik Nöbeti’ndeki Sapanca Halkıyla Buluştu | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 Istanbulİmamoğlu zutere ndị Sapanca
19 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, General, Gondola, Mpaghara Marmara, Turkey, TELPHER 0
imamoglu zutere ndị sapanca na nobet ụgbọ ala nobet
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu Bolu Munu Dam na Melen Dam na Izmit Metropolitan tupu nleta na mpaghara ndị dị na Sapanca zutere ụmụ amaala na-eche nche megide eriri eriri. İmamoğlu gere ntị n'ihe ndị ụmụ amaala kwuru ma kwuo, ma ọ bụ, ebum pụta ụwa na obi m, ọ bụghị ebe ọ bụla. Ama m na njehie ọ bụla emeere ihe okike bụ ịgba ụmụ anyị na ọdịnihu anyị. Nghọta nke na-eleghara mmadụ enweghị ike ịchị mpaghara ọ bụla. Ọ bụrụ na i leghara iwu ndị mmadụ anya, iwu gbasara mmekọrịta mmadụ na iwu, nke a agaghị eme. ”
Onye isi obodo Metropolitan (IMM) Mayor Ekrem Imamoglu, Ọchịchị Bolu n’okporo ụzọ tupu ọbịbịa ya kwụsịrị na Sapanca. İmamoğlu zutere ndị bi na Kırkpınar Hasanpaşa Agbataobi, ndị bụ ndị ọrụ dị na-emeghachi omume na "Cable Car Project ihale, nke ndị obodo Sapanca bibiri n'afọ gara aga iji nye aka na njem. Mụ nwanyị, ụmụ nwoke, ndị okenye, ụmụaka niile nọ n’agbata obi, ndị lere Imamoglu “Ihe niile ga-adị mma nke ukwuu” ọchị ma gosi Onye isi ala IMM n’anya. Nwaanyị nwanyị gosipụtara na ya hụrụ İmamoğlu n'anya, bu Nke a bụ ihe ịtụnanya ya.
ND NE ANYB NA-EGO: KAR ANY WE ANYAIN ANYA EGO
Mgbe ọ na-ekwuchitere ndị agbata obi, Kırkpınar gburugburu na Onye Isi Ahụ Clublọ Egwuregwu n'èzí Hüsamettin Koçlu gwara İmamoğlu, "Nke a bụ naanị mpaghara nzukọ anyị nwere mgbe ala ọma jijiji mechara. Ọ bụkwa naanị mpaghara ahịhịa ndụ nke Kırkpınar Hasanpaşa Agbataobi. Mpaghara ụmụ anyị na-egwu egwu. Otu n'ime njirimara ya kachasị mkpa bụ mmiri mmiri na-azụ ọdọ Sapanca. Mita 5,5-6 nọ n'okpuru mmiri. Anyị nọ na nnukwu nsogbu. Anyị anaghị emegide ụgbọ ala USB n'ụzọ ọ bụla. Anyị chọrọ ịkwaga Okwesiri iwu ya n’ime otu n’ime obodo ekwesịrị ịmalite ya. Ha nwara ime ka anyị bụrụ ndị mbịarambịa nke anyị. Ebumnuche ha bụ imeghe mpaghara a na iji zging bilgi.
“Enwere m olileanya na olu ga-anụ ịdọ aka ná ntị gị”
N'ikwu na ya mara na uche nke ndị Sapanca, İmamoğlu kwuru, “A na m aga ma na-abịa karịa afọ 20. Okike nke ebe a sitere na uche nke ndị bi na ya. M na-akwanyere mbọ gị ùgwù. Ọ ga-amasị m ikpọ ma Mayor nke Sakarya na Mayor nke Sapanca ka ha nwekwuo nlebara anya na usoro a. Na-ele anya na-eleba anya n’ihu. Nke a bụ ebe a maara nke ọma, nke jupụtara na njem. Have nwere aro ị nwere ike itinye ego dị iche iche n’ihe dị iche iche. Onye osote Sakarya, (CHP) Onye isi oche otu Engin Özkoç nwekwara mmasị na usoro ahụ. Ọ bụ ezigbo onye nnọchi anya. Anọ m n’obi nke okike, agbanyeghị ebe. Ama m na njehie ọ bụla emeere ihe okike bụ ịgba ụmụ anyị na ọdịnihu anyị. Enwere m olileanya na ị ga-anọdụ ala na tebụl ma gee ntị na ọchịchọ, arịrịọ na ịdọ aka ná ntị gị.
ALIŞ ANY ARE na-arụ ọrụ itinye ụzọ mgbaaka ga na - agbakwunyere 'ọchịchị nke ya'
Imamoglu, na-emeghachi omume ọzọ maka mmachibido iwu nke Haydarpaşa na Sirkeci ụgbọ elu na ncheta nke ụmụ amaala, kwuru, sị: “Anyị na-anwa ise eserese ụzọ site na-elekwasị anya na ịga nke ọma na ịge ntị n'olu ọha. Dịka ọmụmaatụ, ụnyaahụ anyị kpọkọtara onye isi m n'akụkụ 1000 wee sị, 'Olee ụdị obodo ịchọrọ ibi? Nghọta nke na-eleghara mmadụ enweghị ike ịchị mpaghara ọ bụla. Nke a anaghị eme ma ọ bụrụ na ndị mmadụ achọọ ileghara iwu mmekọrịta mmadụ anya site na iwu onye ọ bụla. Ọ bụ omume mmadụ, n'ezie. Nke a bụkwa nkwenye anyị. Ọ bụ ihe nkwenye. Ọ bụ nkwenye agbata obi dị mfe .. Imamoglu, ụmụ amaala ahụ hapụrụ mgbe ha nwesịrị foto mkpokọta.
Ndị ọrụ İZBAN zutere ndị Izmir
Onye isi ndị isi ụgbọ njem-Sen, Kuş
Onye isi oche Aktaş zutere OtoKoop Tradesmen